अमेरिकामा लिए चर्चित पत्रकार प्रेम बानियाले ओलीसंग अन्तर्वार्ता ! बानियाले राखे यस्ता प्रस्न (भिडियो सहित ) – पुरा पढ्नुहोस्……
अमेरिकामा लिए चर्चित पत्रकार प्रेम बानियाले ओलीसंग अन्तर्वार्ता ! बानियाले राखे यस्ता प्रस्न (भिडियो सहित )
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारको घटनाका कारण अप्ठेरोमा परेका छन् । उनलाई अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुले सोही घटनाको प्रश्नले लखेटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्मला पन्तको घटना अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाईको प्रश्नले लखेटेको हो ।
अमेरिकामा रहेका पत्रकार प्रेम बानियासंगको अन्तरवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका विषयमा आफुले दिएको अभिव्यक्तिलाई समेत अतिरञ्जित गरिएको बताए । उनले निर्मला पन्तको घटना अनुसन्धान गर्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्ने भन्दै अभिब्यक्ति दिएपछि विवादित बनेका थिए । उनले नबुझ्नेहरूको जमातले सो अभिब्यक्तिलाई अतिरञ्जित बनाएको टिप्पणी गरे ।
कोस्टारिकाबाट अमेरिकाको न्युयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार प्रेम बानियाँसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा ‘आफुले कुनै कुनै अपराधका घटना १२ बर्षमा पनि पत्ता लागेका छन्, हामी अनुसन्धानमा कमजोर छैनौं’ भन्ने आसयमा बोलेको कुरालाई बंग्याएर अर्कै अर्थ लगाएको बताए । उनले निर्मला पन्तको घटनामा सरकार गम्भिर ढंगले अनुसन्धानमा जुटेको बताएका छन् । फेरि अतिरञ्जित बनाएर हल्ला गर्नेहरू, राजनीति गर्नेहरूको बुझाई कस्ततो हो ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले आफु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपनाका लागि सक्रिय रहेको बताए । उनले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रति संकेत गर्दै भने, ‘केही– केही मान्छेले किन रडाको गरेका हुन्, मलाई यो थाहा छैन ।’ तलको भिडियो हेर्नुहोस ..
Prevपत्याउनै नसकिने गरी यसरी एकाउक ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य हेर्नूहोस
Nextहोण्डाको १६० सीसी क्षमताको एक्स् ब्लेड सार्वजनिक, मुल्य निकै आकर्सक , हेर्नुहोस
आफ्नै छोराको डुप्लिकेट भेट्दा काखमा लिएर भक्कानिए दिपेन शाहका आमाबुबा-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) सक्दो शेयर गर्नुहोस
ज्योतिषः पर्सी निकै दुर्लभ खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै, यी ९ राशीमा रहनेछ ३० दिनसम्म यस्तो खतराक प्रभाव ; पढेर शतर्क रहनुस
भर्खरै: रविले फेसबुक वालमा फोटोसहित स्टाटस अपलोड गर्दै दिए सबैलाई यस्तो खूशी…